Nepal Dayari | किरण गजमेर अमेरिका जादै, जानेबेलामा सबैलाई सम्झीदै भाबुक बने, कहिले फर्किन्छन अब ?
किरण गजमेर अमेरिका जादै, जानेबेलामा सबैलाई सम्झीदै भाबुक बने, कहिले फर्किन्छन अब ?
भाद्र १२, २०७८ शनिबार ७७६ पटक हेरिएको
काठमान्डौ : द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ का बिजेता किरण गजमेर अमेरीका फर्किदै छन्। केहि समयदेखी आफु हुर्किदै आयको देश नेपालमा रहेर धेरै नेपालि मनहरुको मनजित्दै आयका किरण अमेरिका फर्किने कुराले धेरैले धेरै किसीमका प्रतिक्रिया समेत दिदै आयका छन्। उनको अहिलेको नेपाल बसाइ निकैनै सुखद अनि जिबनको फलदाई भयको हामि सबैले अनुमान समेत लगाउन सकिन्छ। नेपालको एक ठुलो रियालिटी सो भ्वाइस अफ नेपालको ट्रफी पायका किरणले यस भन्दा अगाडि समेत आफ़ुने नेपालि नागरिकता पायको जस्तै अनुभब गरेको समेत बतायका थिय। जुन कुराबाट पनि धेरै दर्शक श्रोताहरु उनि संग नजिक भयको पनि बुझ्न सकिन्छ।
किरण गजमेर आफैले भनेका छन् मेरो कुनै देश छैन देश नभयको नागरीक हम जसले गर्दा धेरै दुखसमेत लागेका कुराहरुले सबैलाई दुखीत समेत तुल्यायको थियो। भुटानी सरनार्थी सिबिर झापामै हुर्कियका किरण गजमेर भ्वाइसको बिजेतासंगे उनि आफु खेलेको र बालापनहरु बितायका ठाउहरुमा पुगेर पनि उनले खुसीयाली संगै आसिर्बाद समेत लियका थिय। उनका हरेक कुराका सब्दहरुमा सबैले ति सब्दहरुलाइ नजिकबाट नियाल्दै धेरै राम्रा राम्रा प्रतिक्रियाहरु समेत दियका थिय। कहिँ कतै भने उनले पायको भ्वाइसको जितलाई डलरले किनेको भ्वाइस समेत भनेर कुराहरु आयको देखिन्थ्यो। यस्ता कुराहरुलाई समेत उनले प्रष्ठपार्दै उनि धेरै नेपालका ठाउमा पुगेका थिय।
किरण गजमेर अब नेपाल बाट फेरी अमेरिका गयपछि कहिले फर्किन्छन होला भन्ने धेरैको जिज्ञाशा समेत हुन सक्छ। यो बिषयमा किरणले भनेका छन् “मैले पायको यतिधेरै मायालाई कहिल्य बिर्शन सक्छु र त्यसैले धेरै भनेको सकेसम्म १-२ हप्तामा फर्कने कोसीश गर्ने समेत उनले बतायका छन्। भर्खर मात्र आयको उनको नया गित पारौ कान्छी झ्याइ-झ्याइको विमोचनको क्रममा उनले अन्तरक्रिया दिदै भनेका थिय मैले पायको यो माया हराउननदिदै मा फर्किने छु मलाइ कहिल्य पनि नेपालि मेरा सुभचिन्तकहरुले भुल्नुहुने छैन। मा चाडो अमेरिका बाट फर्किने छु। त्यस्तै सोहि कार्यक्रमकै क्रममा किरणले आफ्नो बिहे नेपालि सैलीबाटै गर्ने समेत बतायका छन्।
किरण गजमेर अमेरिका जाने भयपछि उनको बारेमा अहिले सामाजिक सनजालहरुमा धेरै किसीमका सुभकामनाका पोष्टहरु देखिन थालेका छन्। जसले गर्दा पनि किराना प्रतिको माया धेरैको भयको बुझ्न सकिन्छ। उनले सोहि कार्यक्रमकै बेलामा भनेका थिय बुवा आमाको निकै यादआयको छ त्यसैले पनि उहाहरुलाई भेट्नकै लागि मा अमेरिका जान लागेको हो। र छिटै फर्किने पनि बतायका थिय।
तेस्तै – ड’लरले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ जिते भन्नेलाई किरण गजमेरले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालकै नम्बर एक रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ३ को उपाधि किरण गजमेरले प्राप्त गरेपछि पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा नि*कै टिकाटिप्पणी समेत चलिरहेको देखिन्छ। ड*लरले जिते भन्नेहरू लाइ किरणले ज*वाफ दिएका छन्, म पहिले शरणार्थी थिएँ मलाई त्यहिँ शरणार्थी भन्ने गर्थे र आज म अमेरिकामा बस्दै आएपछि ड*लरले जिते भन्दै म माथि त्यो ट्या’ग लगाएका हुन्। त्यसैले केहि फरक पर्दैन मैले प्राप्त पैसा मैले एक रुपियाँ पनि ख*र्च गर्दिन, सबै दु*खी पीडितहरुलाई सहयोग तथा हस्तान्तरण हुनेछ।
किरण गजमेर यस्तो व्यक्तित्व हुन् जुन सहयोग भावनाका छन् आफूले भोगेका पी’डाहरुलाई म*हशुस गर्दै उनि सहयोग गर्न चाहान्छन्। पहिले दुईटा ए*म्बुलेन्स सहयोग गर्ने कुरा भएको थियो, तर आजको अन्तर्वार्तामा किरणले तीनवटा एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने घो*षणा गरेका छन्, एक ए*म्बुलेन्स झापाको श*रणार्थी सिविरमा बस्नेहरूको लागि, अर्को कर्णाली प्रदेशमा र अर्को सुदूरपश्चिमको लागि सहयोग गर्ने बताएका हुन्। एम्बुलेन्स तयार हुन्छ करिब दुई महिना लाग्ने र तयार भएपछि हस्तान्तरण गरेर आफू अमेरिका जाने बताएका छन्। नेपाल बिछट्टै माया गर्ने किरण बेलाबेलामा नेपाल आउने पनि बताएका छन्, आफ्नो माटो जन्मभूमिलाई असाध्यै माया गर्छन् गजमेरले।
उनी आफ्नो अ*सली चिनारी पर्गेल्न जन्मभूमी फर्कन्छन्। गायनले उनलाई आत्मासम्मानबोध गराएको छ। उनले नेपाली संगीतकै आलोकमा यश कमाउने मनासय राखेका छन्। यतिबेला ‘भ्वाइस अफ नेपाल’को स्टेजबाट आफ्नो चिनारी बनाइरहेका छन् उनी। हरेकपलको खबर बाट
लाइसेन्स निकाल्न चाहने सबैलाई आयो नसोचेको खबर (तुरुन्तै हेर्नुहोस)
दशैमा विदेशबाट नेपाल आउदा यी सामानमा लाग्ने भयो भन्सार, कति..?